VAKY BANTSILANA : Sao lasan-ko vavany no betsaka… | NewsMada
Ilàna maso arivo ny fitantanana ny raharaham-panjakana, satria folo elatra ahina io ka mitaky fahamalinana. Mihamitombo ny fahantran’ny Malagasy, na dia nisy nilaza aza fa porofoy amiko fa mahantra marina ny Malagasy. Tampotampoka indray niteny fa 90%-n’ny vahoaka no mahantra raha nandray ny fitondrana ny tenany. Ny filazana izany ve no midika fa tsy tomponandraikitra amin’ny fahantrana mianjady ny isan-tokantrano ny mpitantana? Raha noheverina fa fintana no tokony ho nomen’ny mpitondra firenena ho an’ny olona mitady trondro. Naleon’izy ireo nisafidy ny hanome trondro hatrany, mba tsy hahafahan’izy ireo mihetsika. Izay ve no heverina fa tena fampandrosoana? Handroso tahaka ny fandrotrarana amoron-kady tokoa ny firenena, mandroso ihany fa handroso hidina!
Hendratrendratra tahaka ny akoholahy manitsa-dranty sy talanjona tahaka ny novakiam-baratra hatrany ny vahoaka. Manoloana izao fanapahan-kevitry ny Fitondrana manao befiavy amin’ny fizarana fanampiana izao, lasa ihany ny eritreritra, akoho iray tokoa no vonoina ka famaky fito no lanjalanjaina. Milaza ny hanompo vahoaka amin’izay, hono. Sao lasan-ko vavany fotsiny amin’ny karazana hetsika vonjy tavanandro tsy mahavita taona. Tsy misy vahaolana mazava ialan’ny vahoaka amin’izao fahantrana lalina sy mangirifiry izao. Raha nisafidy ny hampanao asa tanamaro ho an’ny vahoaka ny mpitondra, azo atao anie no mampaboly hazo fihinamboa azy ireo, mba hioty ny vokatra aoriana. Hisy fitsinjovana ny ampitso tokoa…
Ho angadilavalela ela niasana tokoa ve izy ireo ka hampiseho ny tena traikefany? Sao lahy, ho angadimondro tsy ahatapak’ahitra… Maro tsy tambo isaina ireo zava-mahamay andrasana valiny amin’izy ireo. Anisan’izany ireo fanampiana manokana mahakasika ireo Kaominina miisa 35, izay tsy maty afoy, tsy velon-kantenaina ny tohin’ny famotorana. Manampy ireo ny raharaha mbola tsy ahitam-baliny, tahaka ny “Raharaha Antsakabary”, izay nitsaha-ketriketrika tahaka ny sosoa voatapo-drano. Tsy hita tohiny mandraka ity ny androany ny “Raharaha Tsirava”, izay mpanao gazety nodarohan’ny polisy, ny resaka fitsaram-bahoaka tsy ahitam-bahaolana…Ahina ho vitavita ho azy sy tsy hitahita ho azy avokoa izy ireny.
Very fanahy mbola velona hatrany ny isan-tokantrano isaky ny fiandohan’ny volana izao satria miakatra hatrany ny vidin-tsolika. Ny fiara mpitatitra sasany eto an-drenivohitra efa manangasanga ny saran-dalana 500 ariary. Na tiana na tsy tiana, ny madinika hatrany no iangonan’ny rihitra amin’ny tsy fahafehezan’ny fitondram-panjakana ny momba ny vidim-piainana. Tsy hita mazava ny tena paikady matotra ialan’ny vahoaka amin’izao fahantrana mangitsokitsoka izao. Mahazo laka hatrany ny herin’ny vola isan-tsehatra. Ny fitiavam-bola sy ny fitiavam-pahefana no mibahana ? Mamy ny vola sy ny fahefana fa ny fitiavan’azy loatra tsy maintsy mahakenda na hiodin-ko vy na hiodin-ko vato. Na inona anefa fahaiza-miresaka, rehefa halam-bahoaka tsy maintsy very fanjakana. Ka sao dia lasan-ko vavany no betsaka e!